Indawo yokuhlala yamandulo eMonteroni d'Arbia
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguCarolina
UCarolina ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-91% yeendwendwe zakutshanje.
Indawo yam yokuhlala ikufuphi nezobugcisa kunye nenkcubeko, iimbono ezintle zepanoramic kunye neendawo zokutyela. Ungathanda indawo yam yokuhlala ngenxa yezi zizathu: iisilingi eziphezulu, ukuzola kunye nekhitshi. Indawo yam yokuhlala ilungele abatshatileyo, abahambi bodwa, abahambi ngezoshishino, iintsapho (kunye nabantwana) kunye nabahlobo abanoboya (izilwanyana zasekhaya).
Le ndlu ibekwe kumgangatho ophantsi wesakhiwo senkulungwane ye-19, ibonelela ngegumbi lokulala elinebhedi ephindwe kabini kunye nethuba lokongeza ibhedi enye eyongezelelweyo ngesicelo ngexabiso le-8 ye-euro (eya kuhlawulwa ekuhlaleni), igumbi lokuhlala kunye ibhedi isofa. oyedwa, nekhitshi kunye lokuhlambela. Ifakwe ngezinto zakudala zokwenyani kwaye ibonisa isilingi ekhazimlisiweyo. Le ndlu ikhokelela kwigadi enkulu kwaye igcinwe kakuhle, ixhotyiswe ngetafile, izitulo, i-oven yokutshisa iinkuni kunye ne-barbecue. Apha ungaphumla kwaye utye. Indawo yokupaka yasimahla iyafumaneka.
Le ndlu ikwiziko lembali elizolileyo leMonteroni d'Arbia, idolophu ekwiCrete Senesi ewela yiVia Francigena. Kumgama omfutshane ukusuka kwindlu kukho iivenkile zokutyela, imivalo, iivenkile, iivenkile ezinkulu kunye neebhanki. Izithuthi zikawonke-wonke zinduluka kwidolophu onokuthi ufikelele kuyo ngokukhawuleza eSiena nakwezinye iindawo zokuchithela iiholide (Pienza, Montalcino, Montepulciano), kodwa kunye neFlorence kunye neGrosseto. EMonteroni okanye kwindawo ekufutshane nayo kunokwenzeka ukuba uhambe ukhwele ihashe, uhambe ngokukhululeka kwiindlela ezimdaka, uhambe ngebhayisekile yeentaba, uzintywilisele kwiibhafu ezishushu zaseRapolano Terme okanye eBagno Vignoni. Imizuzu nje engama-20 ukuya kwindawo ye-adventure "Saltalbero".
Kuhlala kukho umntu okhoyo wolwazi kunye nezicelo !! Izixhobo zolwazi lwabakhenkethi nazo ziyafumaneka.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Monteroni d'Arbia